Dowlada Somalia iyo Hay’adda DFID Oo kala Saxiixday Heshiis ku Kacaya Shan Milyan Dollar.(Sawiro) – Heemaal News Network
Ra’iisal Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, kadib markii uu ka soo qayb galay shirkii Oslo Forum ee looga hadlayay xaaladda dhaqaale iyo dib u habaynta Maaliyadda […]
Ciidamada Dawlada Oo Gacanta ku Dhigay Koox al-Shabaab ah iyo Gaari ay Wateen.
Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaliya lagu waramayaa in ay gacanta ku dhigaan rag hubeysan oo weerar ku soo qaaday fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Calamada ee gobolka Shabeellaha Hoose sida lagu daabacay warbaahinta dowladda. […]
Ganacsade Lagu Dilay Duleedka Muqdisho.
Kooxo hubeysan ayaa maanta barqadii ku dilay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Muqdisho nin Ganacsade ah oo caan ka ahaa deegaanka. Sida wararka ay sheegayaan labo dhalinyaro ah ayaa toogasho ku dilay Ganacsade lagu magacaabi […]